Gustaf Fridolin oo u jawaabey Jimmie Åkesson - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gustaf Fridolin oo u jawaabey Jimmie Åkesson
La daabacay tisdag 2 juli 2013 kl 10.19
Shalay oo uu bilowday toddobaadkii siyaasaddu ayaa ahayd maalintii xisbiga Sverigedemokraterna oo hoggaamiyaha xisbigu Jommie Åkesson khudbad ka jeediyey meel fagaare ah. Waxyaalihii Jimmie Åkesson khudbadiisa kaga hadlay waxaa ka mid ahaa weerar uu ku qaadey xisbiga Doogga (Miljöpartiet) . Wuxuu kaloo maalintii isniinta ku magacaabay ”maalintii ceebta”. Hoggaamiyaha xisbiga Doogga Gustaf Fridolin oo taas ka jawaabaya ayaa subaxnimadii u sheegay barnaamijka Gomorron Sverige ee SVT: ”In dadyowgu aad isu dhexgalaan iyo bani-aadanimada ayaa ah waxyaalaha looga hortegi karo ajnebi-nacaybka”.
Dagaalkaan hadalkuna wuxuu ka bilowday sharcigii dhowaan soo baxay oo ku saabsanaa dadka sharci-darrada ah. Jimmie Åkesson oo taas dabaraacaya ayaa khudbadiisii ku yiri:
- Waa wax aad xaq-darro u ah in dadka hawlgabka ah oo noloshooda oo dhan soo shaqeynayey, canshuurna bixinayey, aysan hadda awoodin lacag ay ilkaha ku samaystaan, halka ay dadka sharci-darrada ku jooga dalka helaan adeegyo lacag la’aan ah.
Gustaf Fridolin oo aamminsan in fikirka Jimmie Åkesson uu abuurayo ajnebi-nacayb ayaa ugu jawaabey:
- Marka dadka la kala sooco, waxaa naaxa ajnebi-nacaybka. Sidaas awgeed waxaa na saaran siyaasiyiin ahaan in aan dalka ku maamulno siyaasad si cadaalad ah u simeysa dhammaan dadka dalka ku wadanool. Waxaa wax lala yaabo ah in dadka daryeelkooda caafimaad lagu xiro warqadaha aysan haysan iyo waxyaalaha aysan baahida u qabin.
Mar uu Gustaf Fridolin ka jawaabayey hadalkii Jimmie Åkesson ku sheegay in xisbiga Dooggu yahay xisbiga ay aad isaga soo horjeedaan, ayuu yiri:
- Taasi waa arrin isaga ku taal. Waxaan nahay laba xisbi oo aad u kala afkaar fog. Anigu qof ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan ku noolahay dal ay dadku u soo cararaan. Waxaase ii muuqda dhibaatooyin kale oo xal u baahan, sida dhibaatooyinka ka jira waxbarashada dugsiyada iyo sidii shaqooyin loo abuuri lahaa.
Maanta oo ah maalintii labaad ee toddobaadka Almedalen waxaa fagaaraha khudbad ka jeedin doona hoggamiyaha xisbiga Doogga Gustaf Fridolin.